ဆိုဒ် စီမံခန့်ခွဲမှု ရေးရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆိုဒ်တင်ထားသည့် နေရာ (ဟို့စ်တင်)[ပြင်ဆင်ရန်]
စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းနှင့် စွပ်စွဲပုတ်ခတ်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျာမနီတွင် ဝီကီလိ (ခ်) ဒိုမိန်းပိုင်ရှင်အိမ်ကို ရဲက ဝင်စီးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဩစတြေးလျ၏ အနာဂတ်တွင် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မည့် အလားအလာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြေရှင်းရေး ဗဟိုဌာန (The Centre for the Resolution of the Emergency Situation - CRES) က ဝီကီလိ (ခ်) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဆင်ဆာ လုပ်ထားသည်။ ထို့ပြင် တခြားသော ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ၄၀,ဝ၀ဝ ကျော်ကိုလည်း ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ထားသည်။အကြောင်းပြချက်မှာ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် အရေးပေါ် ဒီကရီဖြင့် တားမြစ်ထားခြင်းဟု ဆိုသည်။. ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဝီကီလိ (ခ်) ကိုဝင်ပါက ဤစာမျက်နှာ [လင့်ခ်သေ] သို့ အလိုအလျောက် ရောက်သွားပေလိမ့်မည်။
အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒိုင်းနမစ် နက်ခ်ဝပ် ဆားဗစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
သိသာလာသည့် ဆိုမာလီ လုပ်ကြံရေး အမိန့်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒင်နီယယ် အရပ် မွိုင် မိသားစု လာဘ်စားမှု အရှုပ်တော်ပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျူးလိယက် ဘေယာ ဘဏ်၏ တရားစွဲဆိုမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆာရာ ပေါ်လင်၏ ယာဟူးမေးလ်ပါ အကြောင်းအရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
BNP အဖွဲ့ဝင် စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်တာနက် ဆင်ဆာ စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘီလ်ဒါဘတ် အုပ်စု စည်းဝေးပွဲ အစီရင်ခံစာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀ဝ၈ ပီရူး ရေနံဆိုင်ရာ နာမည်ပျက်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အီရန် နျူကလီးယား မတော်တဆမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
အာဖရိကတွင် အဆိပ်အတောက် စွန့်ပစ်မှုများ - မင်တန် အစီရင်ခံစာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောလ် ၄၄၀[ပြင်ဆင်ရန်]
၉-၁၁ ပေဂျာ မက်ဆေ့ချ် ကြားဖြတ်ဖမ်းယူမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝီကိလိ (ခ်) ပေါ်မှာ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘဂ္ဂဒက် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ဗီဒီယို[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘရက်ဒလေ မန်းနင်း အဖမ်းခံရခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အာဖဂန် စစ်ပွဲ ဒိုင်ယာရီ[ပြင်ဆင်ရန်]
Love Parade စာရွက်စာတမ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
သံတန် ပေးစာများ ပေါက်ကြားမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
ထပ်မံဖွင့်ချဦးမည် ပေါက်ကြားမှုများဆိုင်ရာ ကြေညာချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
Wikileaks Keynote Address at The Next Hope (64kbs) Archived 26 April 2012 at the Wayback Machine.
"December 2, 2010 - 10:00pm Archived6December 2010 at the Wayback Machine.." EveryDNS. Announcement of termination of wikileaks.org.
Video Archived 17 December 2010 at the Wayback Machine. of Julian Assange onapanel at the 2010 Logan Symposium in Investigative Reporting at the UC Berkeley (18 April 2010)
Leak Proof Archived 18 December 2010 at the Wayback Machine. Interview with Julian Assange. 2009/03/13
↑ Reso၊ Paulina။ "5 pioneering Web sites that could totally change the news"၊ Daily News၊ 20 May 2010။ 8 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 October 2011။
↑ "Reportedly spurred by the leak of the Pentagon papers, Assange unveiled WikiLeaks in December 2006" WikiLeaks' War on Secrecy: Truth's Consequences။ 20 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ Scott Bradner "WikiLeaks:asite for exposure" Archived 20 December 2008 at the Wayback Machine., Linuxworld, 18 January 2007. Retrieved 18 January 2007.
↑ "WikiLeaks Spokesman Quits, Blasts Founder Julian Assange As Paranoid Control Freak, Admits To Using Fake Name", by Henry Blodget Archived6March 2012 at the Wayback Machine., 28 September 2010, San Francisco Chronicle
↑ Wikileaks raided by German police။ Networkworld.com။7April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Police raid Wikileaks owner။ Straitstimes.com (25 March 2009)။ 18 August 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taylor၊ Josh (17 March 2009)။ Wikileaks removed from ACMA blacklist – Communications – News။ Zdnet.com.au။ 29 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "WikiLeaks claims Facebook deleted its page, 30000 fans"၊ News.com.au၊ 21 April 2010။ 23 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 May 2012။
↑ "Wikileaks Fan Page Pulled Down for Being "Inauthentic," Says Facebook"၊ techPresident၊ 21 April 2010။ 22 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 April 2010။
↑ Tom Chivers. "MoD 'how to stop leaks' document is leaked Archived7January 2011 at the Wayback Machine." The Daily Telegraph5October 2009. Retrieved6October 2009.
↑ Kalle Holmberg. "Brittisk instruktion mot läckor har läckt ut Archived 23 December 2009 at the Wayback Machine." Dagens Nyheter,6October 2009. Retrieved6October 2009.
↑ 570,000 pager messages from 9/11 released MSNBC 25 November 2009။ MSNBC (25 November 2009)။ 28 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rothacker၊ Rick။ "Bank of America rumored to be in WikiLeaks’ crosshairs"။ 1 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiLeaks&oldid=726810" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။